ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို (၇၅) နှစ်အကြာမှာ ပြန်ရှာတွေ့ - CeleLove
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို (၇၅) နှစ်အကြာမှာ ပြန်ရှာတွေ့
June 14, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်အချစ် 0
အသက် ၉၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် အဘိုးအိုဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို နှစ်ပေါင်း ၇၅ နှစ်အကြာမှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် …. ။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့ရတဲ့ K.T. Robbins ဟာ Jeannine လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ တယောက်နဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်း ၂ လအကြာမှာ အမိန့်ကြောင့် ရှေ့တန်းကို ထွက်ခဲ့ရပြီးနောက် သူတို့ နှစ်ဦး ကွဲကွာခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ် …. ။
ရုပ်သံလိုင်းတခုက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ အဘိုးအို K.T. Robbins ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ရုပ်သံအစီအစဉ်က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေကို ရှာဖွေဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဘိုးအိုကတော့ “သူ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ မသေချာဘူး”လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အသက် ၉၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွား Jeannine ကို ကံကောင်းစွာနဲ့ တွေ့ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
“စစ်ကြီးတုန်းက သူထွက်သွားတော့ ကျမ အရမ်းငိုခဲ့ရတယ်။ တကယ်ပါ။ ကျမ အရမ်းကို ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာ။ သူ့ကို အမေရိကန် ပြန်မသွားစေချင်ခဲ့ဘူး”လို့ Jeannine က ပြောပါတယ် ….. ။ စစ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အဘိုးအို K.T. Robbins ကတော့ “ကျနော် သူ့ကို အခုချိန်ထိ ချစ်နေဆဲပါပဲ”လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ပြန်တွေ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပြီး အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေကြပုံပေါ်ပါတယ်နော် …. ။
ဒုတိယကမ်ဘာစဈက ခဈြကြှမျးဝငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးကို (၇၅) နှဈအကွာမှာ ပွနျရှာတှေ့
အသကျ ၉၈ နှဈ ရှိပွီဖွဈတဲ့ အမရေိကနျ အဘိုးအိုဟာ ဒုတိယကမ်ဘာစဈဖွဈခဲ့စဉျက ခဈြကြှမျးဝငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးကို နှဈပေါငျး ၇၅ နှဈအကွာမှာ ပွနျလညျတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ …. ။ ၁၉၄၄ ခုနှဈက ပွငျသဈနိုငျငံမွောကျပိုငျးမှာ စဈမှုထမျးခဲ့ရတဲ့ K.T. Robbins ဟာ Jeannine လို့ အမညျရတဲ့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ ပွငျသဈနိုငျငံသူ တယောကျနဲ့ ကွိုကျနှဈသကျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ခဈြသူသကျတမျး ၂ လအကွာမှာ အမိနျ့ကွောငျ့ ရှတေ့နျးကို ထှကျခဲ့ရပွီးနောကျ သူတို့ နှဈဦး ကှဲကှာခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ …. ။
ရုပျသံလိုငျးတခုက ဒုတိယကမ်ဘာစဈမှာ စဈမှုထမျးခဲ့တဲ့ စဈသားတှရေဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ပွနျလညျ ကွညျ့ရှုတဲ့ အစီအစဉျမှာ အဘိုးအို K.T. Robbins ရဲ့ ဓာတျပုံတှထေဲမှာ အဲဒီအမြိုးသမီးရဲ့ ဓာတျပုံ ပါလာတာ ဖွဈပါတယျ ….. ။ ရုပျသံအစီအစဉျက တာဝနျရှိသူတှဟော အမြိုးသမီးရဲ့ ကနျြရဈသူ မိသားစုတှကေို ရှာဖှဖေို့ ပွုလုပျခဲ့ပွီး အဘိုးအိုကတော့ “သူ အသကျဆကျရှငျဖို့ မသခြောဘူး”လို့ ပွောခဲ့ပမေယျ့ အသကျ ၉၂ နှဈ ရှိပွီဖွဈတဲ့ အဘှား Jeannine ကို ကံကောငျးစှာနဲ့ တှရေ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ …. ။
“စဈကွီးတုနျးက သူထှကျသှားတော့ ကမြ အရမျးငိုခဲ့ရတယျ။ တကယျပါ။ ကမြ အရမျးကို ဝမျးနညျးခဲ့ရတာ။ သူ့ကို အမရေိကနျ ပွနျမသှားစခေငျြခဲ့ဘူး”လို့ Jeannine က ပွောပါတယျ ….. ။ စဈမှုထမျးခဲ့ဖူးတဲ့ အဘိုးအို K.T. Robbins ကတော့ “ကနြျော သူ့ကို အခုခြိနျထိ ခဈြနဆေဲပါပဲ”လို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ သူတို့နှဈဦး ပွနျတှတေဲ့ ဓာတျပုံတှဟော လူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့နပွေီး အရမျးကို ပြျောရှငျနကွေပုံပျေါပါတယျနျော …. ။
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် စိတ်ဖိစီးမှုမရှိပျော်ရွှင်နေသူတွေရဲ့ အတုယူဖွယ်လျှို့ဝှက်ချက်(၈)ချက်
လူတစ်ယောက် စိတ်အရမ်းပင်ပန်းနေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) ခု